dedaaladii ka mid ah dhaqdhaqaaqa sii dhismaha xadiid tareen xawaare sare gaadiidka horumar degdeg ah a ah ee Turkey. | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 Istanbuldedaaladii ka mid ah dhaqdhaqaaqa sii dhismaha xadiid tareen xawaare sare gaadiidka horumar degdeg ah a ah ee Turkey.
dedaaladii ka mid ah dhaqdhaqaaqa sii dhismaha xadiid tareen xawaare sare gaadiidka horumar degdeg ah a ah ee Turkey.
14 / 08 / 2011 34 Istanbul, DUNIDA, GUUD
Buuraha la qoday, tareenka xawaare sare leh ayaa la ruxay
1,5 kun dadka 2013 waxay u shaqeynayaan kuwa aan joogsi ahayn si ay u soo qaadaan xariiqda u dhexeeya Eskisehir iyo Istanbul ilaa 2. Waqtigaas ayaa raacay waxyaabihii udhaxeeyay Eskisehir iyo Istanbul, marxaladdii labaad ee line-tareenka xawaaraha sare ee Ankara-Istanbul. Ankara-Eskisehir ayaa laga furay 95. Gaadiidka Tunnel ee marxaladda labaad ayaa sidoo kale ku dhow. Dooxooyinka Köroğlu iyo Buuraha Weyn, waxaa la furay tunnel weyn oo tobanaan kiiloomitir ah. Sannad gudaheed, dhammaan jadwalladaas waa la dhammeeyaa waxaana la bilaabi doonaa marinka tareenka iyo koronto-dhiska. Shirkadaha gawaarida xamuulka ah waxaa si buuxda u fuliya shirkadaha Turkiga. Marxaladda labaad, shirkadaha shisheeye waxay ku lug yeelan doonaan wadaxaajoodka Sino-Turki ee Turkiga.
Markii la dhameeyo tareenka xawaaraha sare ee Ankara-Istanbul, gaadiidka aan duulista lahayn iyo gaadiidka xamuulka ah waxaa lagu fulin doonaa Yurub oo isku xira Marmaray ee Gebze. In ka badan boqolkiiba 70 oo ka mid ah jidka tunnels iyo viaducts ee ku yaala gudaha Iskuul-Kulsekoy ee u dhexeeya Eskisehir iyo Sakarya ayaa la dhameeyay. Tuulooyinka qaarkood waxaa loo furi doonaa habab gaar ah oo ku saabsan wadada 154. Shaqooyinka wareegga labaad waxaa lagu fuliyaa laba marxaladood: Köseköy-Vezirhan iyo Vezirhan-Inönü. Maalgashiga maalgashiga 1,7 bilyan doolar ayaa loo sameyn doonaa marxaladda labaad ee tareenka xawaaraha sare.
11 kun mitir 342 qaybta mitirka 8 ayaa laga furay qaybta 10 kun mitir 960 oo u dhaxeysa Köseköy-Vezirhan. Mitirka 29 kun 147 ee mitirka 20 ee qaybta mitirka 15 kun 804 ee u dhexeeya Vezirhan iyo Inönü ayaa la dhameeyay. Wadar ahaan, 40 kun mitir 489 oo ah mitirka 28 kun mitir 26 ee tunnelka 764 illaa iyo hadda waa la dhammeeyey. 4 boqolkiiba 395 ee xayiraadda dhererka 11 kun mitir 79 inta u dhaxeysa Köseköy-Vezirhan ayaa la dhameeyay, halka 5 boqolkiiba 843 oo xadhig ah oo dhererkeedu dhan yahay 13 kun 68 u dhexeeya Vezirhan-Inönü. Wadarta 10 kun oo mitir 238 dhererka 24 dhererka boqolkiiba 74 ee ka badan.
YHT 2013 MADAXWEYNAHA ISTANBUL DHAMMAADKA
TCDD 2. Aşkın Gıcır, Maamulaha Kooxda Wadooyinka Tareenka, ayaa sheegay in mashruuca u dhexeeya Inönü iyo Köseköy ay dib u dayactireen marar badan. Gawaarida wadada isku midka ah sababo la xidhiidha wadooyinka laba-geeska ah ee wadada u socdo ayaa isbedelaya Gicir, "Tareenku maaha sida jidka weyn, waddada isbeddelay, tirada buundooyinka iyo tunnels ayaa kordhay." Inönü-Köseköy inta u dhaxaysa bannaanbaxyo badan oo lagu xoojinayo dhulka in shaqada la qabtay Geyri, khadka ayaa lagu dhammeeyn doonaa dhammaadka 2013. Khadka oo dhan wuxuu yeelan doonaa tunnel kilomitir kilomitir 40,5. Qodista 26,7 kilomitir ayaa dhammaatay. Dhererka xayiraadda ee xadhigga ayaa ku wareegsan 10,2. 74 boqolkiiba way dhammaatay.
Diiwaanka qashinka dunidu waa la jebin doonaa
Goobta ugu dheer ee xariiqa, Meelaha 26,6 ee Goobta Bilecik Karakoy ee tareenka si khaas ah loogu soo saarey Germany 'Tunnel Diavbing Machine' (CPM) ayaa loo keenay qalab. Qeybta weyn ee 2 ayaa miisaankeedu yahay kun tan oo ah mid ka mid ah mashiinnada dhaadheer ee ugu weyn adduunka. Taliyaha Qaybta TBM Sertaç Tokcan, Xerada mitirka 20 ee mashiinka ayaa la qaban doonaa maalin kasta, ayuu yidhi. Waqtigan xaadirka mitirka 380 ee rikoorka rikoodhka dunida ee bilaha ah. Sertaç Tokcan ayaa sheegay in ay jabin doonaan rikoodhka aduunka adoo gaaraya mitirka 540 bishiiba. Marka qashin-qaadku dhaco, gudaha gudaha tunnel waxaa la gelin doonaa qaybo gaar ah oo la diyaariyey. CPC, ayaa bilaabi doona inay ka qodaan berrito. Dadka 135 waxay shaqeyn doonaan laba jeer oo isbeddel ah. Tunnel ayaa la qorsheeyey in lagu dhameeyo bilaha 14.
Pehlivanköy - Uzunköprü - Hudut (PITYON) Mashruuca Qalabka Mashruuca Qalabka Nidaamka Dhisidda